Inona no atao hoe CMS? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny C	» CMS
CMS no fanafohezana ny Content Management System.
fampiharana izay manambatra sy manamora ny famoronana, fanitsiana, fitantanana ary fizarana votoaty. Ny CMS dia manasaraka ny famolavolana sy ny lohahevitra amin'ny atiny, ahafahan'ny orinasa iray manangana sy manitsy tranokala tsy mila mpamorona. WordPress dia CMS malaza.